Qiso Gaaban Oo Mudan Cibro Qaadasho “Gacantuu ALLE SWT Kuu Fidiyay Ayaad Diiday”. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Qiso Gaaban Oo Mudan Cibro Qaadasho “Gacantuu ALLE SWT Kuu Fidiyay Ayaad Diiday”.
Published: March 19, 2014, 12:00 am
Faadumo & hooyadeed waxay fadhiyaan gurigooda qaybta fadhiga waxaa u soo galay gabadh jaarkooda ah oo ay aad isugu wacnaayeen waanay salaantay laakiin maxaa dhacay!
Gabadhii ayaa bilowday inay gacanta u soo taagto Faadumo & hooyadeed laakin faadumo waxay diiday inay gacanta u fidiso ama ay salaanta ka qaado.
Gabadhii ayaa aad u yaabtay oo ka xumaatay inay faadumo salaanta ka qaadi wayday gacantana ka laabtay.
Gabadhii jaarka ahayd oo aad u qajishay ayaa tidhi : malaha waxaan idinku soo beegmay waqti aydaan diyaar u ahayn in la idin salaamo waan ka xumahay imaanshahayga aan idiin imi hadii aan dhib idinku noqdayna iga raali ahaada.
Markii ay Faadumo hooyadeed aragtay sida foosha xun ee inanteedu samaysay ayay iyaduna aad uga cadhootay inanteeda oo ku tidhi : maxaad u jeedaa oo gabadha jaarkeena ah aad u xumaynaysaa oo salaanta uga qaadi wayday ?
Faadumo ayaa tidhi : waan ka xumahay hooyo arinka dhacay lakiin ma ogtahay adiga in habeen iyo maalinba gacanta laguu soo taagayo oo aad diidan tahay?
Hooyadii : waa ayo cida aad leedahay gacanta ayay kuu soo taagaysaa oo waad diiday?
Faadumo: hooyo hubso bal cida habeen iyo maalinba gacanta kuu taagaysee aad ku diiday?
Hooyadii : fadlan ha igu ciyaarin ee ii sheeg cida gacanta ii fidisee aan diiday?
Faadumo : hooyo ma ogtahay in habeen iyo maalinba aad denbi ku jirto habeen kasta iyo maalin kastana Illaahay swt kuu fidinayo gacantiisa si uu toobada kaaga aqbalo adiguna aad diiday inaad aqbasho gacantaa Alle kuu taagay.
Hooyo ma ogtahay inaadan salaadaha tukan oo aanad soomin oo aanad xijaabka xidhan oo dadka aad xamato oo dadka isku dirto, waxaasoo dhan adigoo samaynaya ayaa Alle subxaana e habeen iyo maalinba kuu fidinayaa gacanta si toobada kaaga aqbalo adiguna waad diiday? Maxaad ula yaabi in qof bin aadam ah oo gacanta ii taagay inaan diiday adiguba Alle diiday gacanta uu kuu soo fidiyee. Dunuubta miyaadan ogayn in Alle uun uu dhaafo
Hooyadeed ayaa aad uga oyday wacdiga inanteeda taasina waxay sabab u noqotay toobad keenka hooyadeed.
Faadumo way kacday oo jaaradeedii ayay dhunkatay oo ku dhegdhegtay oo tidhi walaashayeey I saamax waayo uma jeedin inaan ku xumeeyo waxaan doonayey inaan ka sameeyo halkaas mawduuc aan ku wacdiyo hooyaday waanay ii suuro gashay.
Faadumo waxay la kacday jaaradeedii oo ay sii sagootiday oo gaadhsiisay gurigeedii ilaa jaaradeedii ka raali noqotay.
Soo noqoshadii ayay faadumo iyo hooyadeed mar kale sii faaleeyeen arimihii dhacay iyo sida xariifnimada iyo xirfada leh ee ay faadumo hooyadeed u wacdiday runtii hooyadeed oo la yaabtay xikmada inanteeda ayaa uga mahad celisay inanteeda sidii ay u soo jeedisay dareenkeeda wacdigana u gelisay.
Qisadani waxaynu ka faa’iidnay.
In qofka daaciga ah ama wax wacdiyayaa uu ku dedaalo inuu markasta isticmaalo xikmad.
In qofku u naseexeeyo umada intii uu karo isagoon waalidkii xataa uga xishoon inuu xaqa u sheego.
Qisadan waxay ku fadhidaa xadiis uu xabiibkeenu yidhi : Illaahay swt wuxuu fidiyaa gacantiisa habeenkii si uu uga toobad aqbalo kuwa danbaaba maalintii, wuxuu kaloo fidiyaa gacantiisa maaliintii si uu uga toobad aqablo kuwa habeenkii danbaaba, sidaas ayuu u soo fidinayaa gacantiisa waqti kasta ilaa qiyaamuhu ka dhaco.
Aynu ka faa’iidaysano waqtiga oo aynu gudoono caawimada Alle inala doonayo hadh iyo habenba oo gacanta uu inoo fidiyey aynu qabsano si aynu u badbaadno aakhiro iyo aduunkaba.
Tarjumidii : Hussein Jama Ahmed (guudcade)
DAAWO VIDEO:- Xafiiskii UNIVERSAL TV ee Hargeisa oo la Weeraray “Dhulka ayaa Lala simay & bur bur (Video)